I-Icasa iyalelwe ukuba iphenye ngezindaba ezingamanga | News24
I-Icasa iyalelwe ukuba iphenye ngezindaba ezingamanga
Cape Town – IDA isicele i-Independent Communications Authority of South Africa (Icasa) ukuthi iphenye ngokwanda kwezigameko zezindaba ezingombombayi ezweni.
Leli qembu lizwakalise ukukhathazeka ngalo mkhuba ikakhulukazi ezindabeni ezisakazwayo, lisho kanjalo esitatimendeni ngoLwesibili.
OLUNYE UDABA: Ubufakazi bugxeka i-Icasa ngeziteshi zocansi
“Ngokudalulwa kwakamuva komkhankaso we-ANC, "ongumshushaphansi", okuhlanganisa ukusabalalisa izindaba ezingombhombayi ngamaqembu aphikisayo, okuhlanganisa ne-DA, ngenhloso yokuba nomthelela ohlelweni lezwe lokuvota, sidinga iziphathimandla ezifanele ukuba zenze umnyakazo ukuze zivikele isithunzi sabezindaba,” okhulumela i-DA, uPhumzile van Damme, usho kanjalo.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngesonto eledlule amaBhungane abike ngohlelo lwe-ANC olungumshoshaphansi nokuthiwa ladla u-R50m nolwaluhlose ukucekela phansi imikhankaso yamaqembu aphikisayo okuyi-EFF kanye ne-DA ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya lwangonyaka ka-2016.
“Ukwanda kwezindaba ezingombombayi – ukushicilelwa kanye nokusakazwa ngenhloso kwemibiko edukisayo kanye nemibiko echemile encike olwazini olungamanga ngenhloso yokuthuthukisa izinhloso zezepolitiki noma ezinye – kuyingozi kwintando yeningi yaseNingizimu Afrika futhi kudingwa ukuphenywa yi-Icasa,” kuqhuma uVan Damme.